Global Voices teny Malagasy » Hong Kong: Voarara Ilay Dokambarotra Halloween · Global Voices teny Malagasy » Print
Hong Kong: Voarara Ilay Dokambarotra Halloween
Voadika ny 16 Novambra 2017 7:49 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika (fr) i Claire Ulrich, Liva Andriamanantena
Sokajy: Hong Kong (Shina), Lalàna, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
(Marihina fa tamin'ny 2 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mikarakara fety Halloween hisarihana mpitsidika maro isan-taona ny Zaridaina Fitsangatsanganana Ocean Park any Hong Kong. Matetika anefa dia miatrika tsikera avy amin'ny vahoaka ny dokambarotr'ity hetsika ity. Norarana ny sasantsasany tamin'ireo lahatsariny tamin'ity taona ity. Mivezivezy any amin'ny YouTube ny iray amin'izany ary nahatonga resabe tany anaty sehatra fifanakalozan-kevitra sy tamin'ny bilaogy tao an-toerana. Toy izao ny tantara : fanakadrihana misy lolo, zaza iray korontanin'ny rafi-pampianarana ary mangataka amin'ny zokiny vavy ny kahie-ny. Endrikendriny: hala-tahaka filma Japoney mampatahotra “ghost-eyes” (mason'angatra). Aza mikitika eo amin'ny etsy ambany raha toa ka mora tohina ianao.
Tsy dia nampihontsina firy  an'i Charlize ny lahatsary, ary nanontany tena izy hoe nahoana no nandrara izany ny governemanta. Saingy tena natahotra kosa i Ryan:
Nihorikoditra aho rehefa nijery izany voalohany ! Tao amin'ny toeram-ponenana HLM tao Hong Kong izany no nitranga, ary mahafantatra ny endrik'io toerana io avokoa ny olona tsirairay ao Hong Kong. Ary misy tantara maro miresaka ‘lolo’ ao amin'io toeram-ponenana io. Sady mahazatra ilay toerana no vao mainka mampivarahontsana satria mahatsiaro ny zavatra niainantsika manokana isika.
Hitan'i Missque fa tena nahomby ilay dokambarotra, na dia tsy nalefa amin'ny fomba ofisialy intsony aza izy io:
Tena be mpijery ilay izy ao amin'ny aterineto na dia voasivana aza. Vao mainka nisarika ny saina ny sivana. Tsy nijery izany ny olona toa ahy (saro-tahotra) raha tsy voarara izany. Tena tsara ilay tetikady .
Na izany aza, voarara ny fandefasana ity lahatsary ity eny fa na dia tao amin'ny aterineto aza ary mety mihatra ny lalàna ao an-toerana. Mety hampitandrina ireo mpanome tolotra aterineto ny biraon'ny Television and Entertainment Licensing Authority ao Hong Kong na hilaza ny votoaty antserasera ho “tsy mendrika” na “manohintohina” any amin'ny Tribonaly, izay ao anatin'ny lalàna momba ny Lalàna Mamoafady. Heloka bevava mahavoasazy handoa lamandy 400.000 dolara Hong Kong sy 12 volana an-tranomaizina ny fandefasana votoaty “tsy mendrika”. Moa ve hanasazy ny mpanao dokambarotra, Ocean Park, sy ny Youtube ny TELA? Angamba tsia, satria tena zaridaina malaza ao an-toerana ny zaridaina Ocean Park ary midika ho fanasivanana ny aterineto ihany koa ny fanapaha-kevitra toy izany . Saingy ahoana ary no tokony hataon'ny TELA, eo anatrehan'ny lalàna iray natao hamehezana ny fampitam-baovao amin'ny fahitalavitra, izay mandrakotra ny sehatry ny hetsika ao amin'ny Aterineto? Nanapa-kevitra ny hanova ny Lalàna momba ny Lalàna Mamoafady sy tsy Mendrika ny governemanta tamin'ny taon-dasa, ary azo inoana fa hatolotra ho fidiana izany amin'ity volana ity. Ho hitantsika eo ny fomba hijerena ny sivana amin'ny aterineto ao amin'izany volavolan-dalàna vaovao izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/16/110447/
 Tsy dia nampihontsina firy: http://yaplog.jp/charlizeblog/archive/209